Luk 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ozi Ọma Luk Dere 15:1-32
Ihe atụ gbasara atụrụ furu efu (1-7)
Ihe atụ gbasara mkpụrụ ego furu efu (8-10)
Ihe atụ gbasara nwa mmefu (11-32)
15 Ndị ọnaụtụ niile na ndị mmehie niile nọ na-abịakwute ya ka ha nụ okwu ya.+ 2 Ma, ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ nọ na-atamu ntamu, sị: “Nwoke a na-anabata ndị mmehie, ha na ya na-erikọkwa ihe.” 3 O wee meere ha ihe atụ a: 4 “Ònye n’ime unu nke nwere otu narị (100) atụrụ, ka ọ ga-abụ, otu n’ime ha fuo, ya aghara ịhapụ iri itoolu na itoolu n’ala ịkpa gaa chọwa nke ahụ furu efu ruo mgbe ọ chọtara ya?+ 5 Mgbe ọ chọtara ya, ọ na-ekukwasị ya n’ubu ya ma na-aṅụrị ọṅụ. 6 Ya laruokwa, ọ na-akpọkọta ndị enyi ya na ndị agbata obi ya, sị ha, ‘Soronụ m ṅụrịa ọṅụ, n’ihi na achọtala m atụrụ m furu efu.’+ 7 Ana m asị unu na otú ahụ ka a ga-aṅụrị ọṅụ n’eluigwe ma otu onye mmehie chegharịa+ karịa ka a ga-aṅụrị n’ihi ndị ezi omume iri itoolu na itoolu ndị nchegharị na-adịghị mkpa. 8 “Ma ọ bụ, ò nwere nwaanyị nwere mkpụrụ ego drakma* iri, nke ọ ga-abụ, otu mkpụrụ ego drakma* funahụ ya, ya aghara ịmụnye ọkụ* ma zachaa ụlọ ya, chọọkwa ya nke ọma ruo mgbe ọ chọtara ya? 9 Mgbe ọ chọtara ya, ọ na-akpọkọta ndị enyi ya* na ndị agbata obi ya, sị ha, ‘Soronụ m ṅụrịa ọṅụ maka na achọtala m mkpụrụ ego drakma* funahụrụ m.’ 10 Ana m asị unu, otú ahụkwa ka ndị mmụọ ozi Chineke si aṅụrị ọṅụ ma otu onye mmehie chegharịa.”+ 11 O kwukwara, sị: “Otu nwoke mụtara ụmụ nwoke abụọ. 12 Nke nta asị nna ya, ‘Nna m, kee ihe i nwere, nye m nke ruuru m.’ N’ihi ya, o keere ha ihe o nwere. 13 Mgbe ụbọchị ole na ole gachara, nwa ya nwoke nke nta chịkọtara ihe ya niile gawa obodo dị anya. O biwere ndụ ọjọọ* n’ebe ahụ, nke mere ka o mefuchaa ihe o nwere. 14 Mgbe o mefuchara ihe niile, oké ụnwụ dara n’obodo ahụ niile, agụụ amalitekwa ịgụgbu ya. 15 Ọ gadịrị ka ọ rụwara otu n’ime ụmụ amaala obodo ahụ ọrụ, onye ahụ eziga ya n’ọhịa ya ka ọ na-azụ ézì.+ 16 Ọ na-agụkwa ya agụụ iwere nri* ézì na-eri rijuo afọ, ma o nweghị onye na-enye ya ihe ọ bụla. 17 “Mgbe anya doro ya, ọ sịrị, ‘Ọtụtụ ndị na-arụrụ nna m ọrụ nwejuru nri enweju, ebe agụụ na-achọ igbu m ebe a. 18 M ga-ebili laghachikwuru nna m, sị ya: “Nna m, emehiela m Chineke bi n’eluigwe, mehiekwa gị. 19 Erukwaghị m eru ka a kpọọ m nwa gị. Were m ka otu n’ime ndị na-arụrụ gị ọrụ.”’ 20 O biliziri lakwuru nna ya. Mgbe ọ ka nọ ebe dị anya, nna ya hụrụ ya ma metere ya ebere. O wee gbara ọsọ gaa makụọ ya* ma jiri nwayọọ susuo ya ọnụ.* 21 Nwa ya nwoke wee sị ya, ‘Nna m, emehiela m Chineke bi n’eluigwe, mehiekwa gị.+ Erukwaghị m eru ka a kpọọ m nwa gị.’ 22 Ma nna ya sịrị ndị ohu ya, ‘Ngwa, chịtanụ uwe mwụda kacha mma yiwe ya, gbanyenụ ya ọla n’aka, yiwekwanụ ya akpụkpọ ụkwụ n’ụkwụ. 23 Kpụtakwanụ nwa ehi gbara agba, gbuo ya ka anyị rie ma nwee aṅụrị, 24 n’ihi na nwa m nwoke a nwụrụ anwụ ma dị ndụ ọzọ.+ O fukwara efu, ma a hụla ya.’ Ha bidoro ṅụrịwa ọṅụ. 25 “Ma nwa ya nwoke nke okenye nọ n’ubi. Mgbe ọ na-alọta ma rutewe n’ụlọ ha, ọ nụrụ ụda egwú a na-akụ na ụda egwú a na-agba. 26 N’ihi ya, ọ kpọrọ otu n’ime ndị na-eje ozi ma jụọ ya ihe na-eme. 27 O wee sị ya, ‘Nwanne gị nwoke alọtala, nna gị gbukwara nwa ehi gbara agba, n’ihi na ọ lọtara n’udo.’* 28 Ma iwe were ya, o kweghịkwa aba n’ụlọ. Nna ya wee pụta rịọwa ya ka ọ bata. 29 Ọ gwara nna ya, sị, ‘Agbaarala m gị ohu ọtụtụ afọ, o nwebeghịkwa mgbe m nupụụrụ gị isi. Ma, o nwetụbeghị mgbe i nyere m nwa ewu ka mụ na ndị enyi m rie. 30 Ma ozugbo nwa gị nwoke a ya na ndị akwụna richara ihe gị* lọtara, i gbuuru ya nwa ehi gbara agba.’ 31 O wee sị ya, ‘Nwa m, mụ na gị nọ mgbe niile, ihe niile bụ́ nke m bụkwa nke gị. 32 Ma anyị kwesịrị ime oriri, ṅụrịakwa ọṅụ, n’ihi na nwanne gị nwoke a nwụrụ anwụ ma dị ndụ ọzọ, o fukwara efu, ma a hụla ya.’”
^ Ma ọ bụ “ndị enyi ya nwaanyị.”
^ Ma ọ bụ “ndụ ịla n’iyi; ndụ nzuzu.”
^ Ma ọ bụ “ụgbụgbọ mkpụrụ osisi karọb.”
^ Na Grik, “dakwasị ya n’olu.”
^ Ma ọ bụ “ahụ́ siri ya ike mgbe ọ lọtara.”
^ Na Grik, “lara ihe gị n’iyi.”